News | Tag: benefits
किन खाने तोफु ? यस्ता छन् फाइदा
काठमाडौँ । तोफु शाकाहारी मानिसहरुको लागि प्रोटीनको राम्रो स्रोत हो । तोफुमा प्रचुर मात्रामा प्रोटीन हुने हुनाले शरीरको वृद्धि विकासमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
अण्डा खाँदा मिल्ने यी तीन फाइदा
एजेन्सी । भनिन्छ, दिनको एउटा अण्डाले हाम्रो धेरै स्वास्थ्य समस्या पर राख्छ । हुन पनि अण्डामा यति धेरै पोष्टिक तत्व हुन्छन् कि, यसले हाम्रो शरिरलाई प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पुर्याइरहेका हुन्छन् । अण्डाले मानव स्वास्थ्यमा पुर्याउने केही फाइदाहरु हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौंः
तुलसीको पातमा यी रोग निको पार्ने क्षमता
काठमाडौँ । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले तुलसीको मोठ बनाएर पूजा गर्छन् । भगवान् श्रीकृष्णको प्रिय वनस्पति भनेर चिनिने तुलसीमा अनेकौं रोग निको पार्ने क्षमता हुन्छ ।
यसकारण च्याउ खानुहोस्
च्याउले प्रसस्त मात्रामा भिटामिन र खनिज पदार्थ प्रदान गर्छ । खानपानले विभिन्न रोगहरु लाग्न नदिन र निराकरणमा मद्दत गर्ने त सबैलाई थाहै छ । त्यस्तै, च्याउको सेवनले पनि विभिन्न रोग लाग्नबाट बच्न सकिन्छ ।
खानासँगै किन चटनी खाने ? यस्ता छन् फाइदा
धेरैले चटनीलाई स्वादको लागि मात्र प्रयोग गरेको पाइन्छ । तर, चटनीले खानालाई स्वादिष्ट बनाउने मात्र काम गर्दैन । यसमा कैयौँ औषधीय गुण पनि हुन्छन् ।
अदुवा खाँदा यस्तो फाइदा !
अदुवालाई तरकारीमा स्वादको लागि प्रयाग गरिन्छ । तर, यसमा औषधिय गुण पनि हुने गरेको छ । यहाँ हामीले अदुवाको फाइदाको बारेमा केही जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
अम्बाको पात खाँदा यस्तो फाइदा !
मानिसहरुले अम्बाको फल मात्र खाने गर्छन् । तर, धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यसको फलभन्दा पनि पात उपयोगी हुन्छ । अम्बाको पातमा दर्जनौँ रोग निको पार्न सक्ने औषधीय गुण हुन्छ । ती गुणहरुको बारेमा हामीले जानकारी प्रस्तुत गरेका छौं ।
अण्डा खानुका फाइदै फाइदा
दहीमा के मिसाएर खाँदा फाइदा ?
दही स्वास्थ्यका लागि राम्रो खुराक मानिन्छ । यो दुधभन्दा पनि बढी फाइदाजनक हुन्छ । यसमा प्रोटिन, क्यालसियम, भिटामिन–वी जस्ता पोषक तत्वहरु हुन्छन् ।